पूर्व माओवादीसँग टाढिदैं प्रचण्ड - नेपालबहस
पूर्व माओवादीसँग टाढिदैं प्रचण्ड
१६ साउन, काठमाडौं । तत्कालिन नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्ने निर्णय गर्न त्यतिखेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ठूलै सास्ती आइलागेको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारसँगको सहकार्यमा सरकार चल्दैथियो, गृह मन्त्रालयसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग थियो । तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि प्रचण्डले ऐतिहासिक निर्णय लिनुप¥यो ।
तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई गठबन्धन मात्र हैन आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने ललीपप दिएका थिए । साथै, समयक्रममा पार्टी एकतै गर्न पनि तयार रहन भनेका थिए । ओलीको प्रस्तावले प्रचण्ड तनावमा परेका थिए । के गर्ने, नगर्ने भन्ने उनको द्विविधा थियो ।
ठीक त्यही बेला प्रचण्डको तनाव दूर गर्न निकटवर्ती नेताहरु हरिबोल गजुरेल, अग्नि सापकोटा, लेखराज भट्टलगायतको जोडबल रह्यो – ओलीको प्रस्ताव स्वीकार्न । यद्यपि सरकारमा रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत केही नेता भने नेपाली कांग्रेससँगैको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए । तर प्रचण्डले शर्माको भन्दा गजुरेलहरुको सल्लाह सुने र सोही अनुरुप एमालेसँग गठबन्धन बनाए ।
कालान्तरमा त्यो गठबन्धनले ऐतिहासिक सफलता पायो । एक किसिमले भन्ने हो भने गजुरेलहरुको सल्लाह नै प्रचण्डका लागि फलिफाप भयो । ओलीसँगको गठबन्धनले प्रचण्डलाई एकीकृत नेकपाको अध्यक्ष नै बनायो, भलै दोस्रो तहको किन नहोस् । प्रचण्डको जन्मजात बानी सधैं अस्थिरतामा खेल्ने नै हो । पछिल्लो अवस्थामा उनी नेकपा भित्रको अस्थिर राजनीतिमा फेरि खेल्न थाले । ओलीविरुद्ध उनी माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको खेमासँग निकट बनेका छन् ।
ओलीलाई तह लगाउने उनमा उत्कन्ठ अभिलाषा पलाएको छ । यसबाट आफू तत्कालै प्रधानमन्त्री र आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बन्ने सपना देख्न थालेका छन् । त्यसैले हिजोआज उनको उठबस माधव समूहका नेताहरुसँग बाक्लो हुन थालेको छ । प्रचण्डको यो अस्थिर स्वभावले उनकै पूर्व सहयोद्धाहरु भने आगो भएका छन् । उनै गजुरेल हुन् वा भट्ट प्रचण्डसँग टाढिएका छन् । हिजो आज खुमलटारमा पूर्व माओवादी नेता भन्दा माधव गुटका नेताको बाक्लो आउजाउ हुन थालेको छ ।
प्रचण्डले हरिबोल गजुरेललगायत पूर्व माओवादी नेताहरुसँग खासै छलफल पनि गर्न छाडेको बुझिएको छ । त्यसैले गजुरेललगायत पूर्व माओवादी नेताहरु पनि खुमलटार जान रुची देखाइरहेका छैनन् । गजुरेल निकट एक पूर्व माओवादी नेताले भने – विस्तारै प्रचण्ड पूर्व माओवादीबाट टाढिएका छन्, उनको निकटता पूर्व एमाले त्यो पनि माधव नेपाल पक्षसँग देखिएको छ । यसले प्रचण्डलाई ठूलै संकटमा पार्ने अवस्था छ । आफ्ना साथीभाईको सल्लाह उनलाई रुचीकर लाग्न छाडेको भान हुन्छ ।
हुनपनि आजकल प्रचण्ड ओलीसँग लामै युद्ध लड्ने तयारीमा जुटेको देखिन्छ । त्यसका लागि प्रचण्डले माधव नेपालको कमाण्डरको भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । नत्र अहिले ओलीसँग मिलेर सत्तामा बलियो हुने र अबको महाधिवेशनमा ओलीकै समर्थनमा पार्टी अध्यक्ष नै हत्याउने रणनीति बनाउनु पथ्र्याे । तर यो काममा प्रचण्ड चुकेका छन् ।
अध्यक्ष कम्रेड धेरै खेल्न थाल्नु भएको छ, त्यसैले हाम्रो सल्लाह सुन्नुभएको छैन– गजुरेल निकट स्रोतको भनाई छ । प्रचण्डको यही रबैयाले गर्दा स्थायी कमिटीमा उनी विस्तारै खुम्चिरहेका छन् । ओलीलाई दुबै पदबाट निकाला गर्नुपर्छ भन्ने माधव नेपाल पक्षको अजेण्डा बोकेर हिंडेपछि प्रचण्डका आफ्नै सहयात्रीले समेत उनलाई छाड्न थालेका छन् ।ओलीले एकपक्षीय रुपमा साउन १३ मा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्दा प्रचण्ड र माधव पक्षले अस्वीकार गरेका थिए ।
सो दिन भएको बैठकमा प्रचण्डकै निकट साथीहरु सहभागी भएनन् । सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट मात्र हैन, स्थायी कमिटी सदस्यहरु गजुरेल, मणि थापा र टोपबहादुर रायमाझी समेत अनुपस्थित रहे । यसबाट एउटा गतिलो सन्देश के गएको छ भने प्रचण्डको अस्थिर स्वभाव र चरित्रप्रति उनकै निकटस्थ नै अहिले आक्रोशित छन् । यही ढंगले प्रचण्ड चल्ने हो भने पूर्व माओवादी पक्षको नेतृत्व अरु नै कसैको हातमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।
प्रचण्डले देखाएको पछिल्लो गतिविधिले सबैभन्दा बढी मर्माहत गजुरेल भएका छन् । सधैं प्रचण्डलाई साथ र समर्थन गरेका गजुरेलको पछिल्लो धारणा ओलीसँगै मिलेर जानुपर्ने हो । तर प्रचण्ड भने ओली भन्दा माधवसँगको सहयात्रा सहज देखिरहेका छन् । यही विषयमा गजुरेलको चित्त दुखेको हो – निकटवर्ती स्रोतको भनाई छ ।
उता, बादल पनि यो प्रकरणमा माधव भन्दा ओलीसँग निकट देखिएका छन् । उनी चाहन्छन्– प्रतिनिधिसभाको बाँकी अवधि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा रहुन् । साथै, ओली मन्त्रिमण्डलमा आफूपनि निरन्तर रहने वातावरण कायमै होस् । यही चाहनाले बादल ओली सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छन् । तर प्रचण्डका लागि भने यो स्वीकार्य छैन । जसले गर्दा प्रचण्ड नै कमजोर भइरहेका छन् ।
उता, रायमाझी र थापा पनि प्रचण्डसँग सधैं त्रशित छन् । माओवादीमा रहँदा सधैं डा. बाबुराम भट्टराई निकट रहेका रायमाझी अन्तिममा प्रचण्डसँगै बसे । तर उनको मन भने अहिले पनि डा. बाबुरामपट्टि नै रहेको बुझाई प्रचण्ड निकटस्थको रहेको छ । जसले गर्दा उनी सधैं प्रचण्डको लागि सशंकित पात्रका रुपमा रहेका छन् ।
मन्त्री भट्टको कथा चाहिं अर्कै छ । उनी सुुदूरपश्चिमका कमाण्डर हुन् । साथै, प्रचण्डका सबैभन्दा प्यारा र विश्वास पात्र पनि । तर पछिल्ला दिन प्रचण्डले माधव नेपाल पक्षका नेता भीम रावललाई बढी च्यापी दिए । दुबैजना सुदूरपश्चिम कै भएकाले मन्त्री भट्टका लागि त्यो प्रिय भएन । त्यसैले उनी आफैं प्रचण्डसँग टाढिन थालेका हुन् ।
यस्तै अर्का नेता मणि थापालाई पनि प्रचण्डले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रियसभामा लैजाने आश्वासन दिएपनि प्रचण्डले थापालाई त्यो अवसर दिएनन् । त्यसैले उनी भड्एिका छन् । थापा पनि अहिले पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन बाँकी नै रहेकाले ओलीसँग नै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।
प्रचण्डसहित उनका परिवारकाे कोरोना रिर्पोट नेगेटिभ
बामदेव गौतमलाई फकाउन भैँसेपाटी पुगे प्रचण्ड
गलित प्रचण्ड र उत्साही ओली वार्ता
मन्त्री भट्टलाई ज्यान मार्ने धम्की !
प्रचण्डको बढ्दो छटपटी
Previous articleकर्णालीका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा विद्युत विस्तार शुरु
Next articleइन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा भीषण पहिरो, मानव बस्तीसमेत जोखिममा